Alcatel wuxuu ku soo bandhigayaa sedexdiisa taleefan ee casriga ah MWC 2019 | Androidsis
Alcatel wuxuu ku soo bandhigayaa taleefannada casriga ah MWC 2019
Alcatel wuxuu ahaa mid ka mid ah magacyada ku jira maalinta furitaanka MWC 2019, oo ay weheliyaan kuwa kale sida Nokia, Huawei o Xiaomi. Sumadda, oo ka tirsan kooxda TCL, ayaa munaasabadda ka dhacday magaalada Barcelona ku soo bandhigtay taleefannadeeda casriga ah. Wadar ahaan seddex taleefan, oo gaara suuqa dhexe iyo kuwa hoose, qaybaha ay shirkaddu si joogto ah ugu shaqeyso.
Waxaan la kulannaa Alcatel 3, Alcatel 3L iyo Alcatel 1S dhacdadan. Saddex telefoon oo cusub oo ay calaamaddu sii wadato inay muujiso inay ogyihiin sida ay nooga tagi karaan qeexitaannada wanaagsan ee qalabkooda, laakiin leh qiime aad u jaban. Marka lagu daro la qabsiga naqshadaha moodada ah ee Android.
Marka xigta waxaan ka hadli doonaa mid kasta oo ka mid ah moodelladan ay shirkaddu naga tagtay. Waxay nooga tageen taxane sheeko cusub oo iyaga ka mid ah. Tusaale ahaan, waxaa la xaqiijiyay in dhammaantood ay la yimaadaan Kaaliyaha Google ee lagu rakibay qaab ahaan. Marka adeegsadayaashu waxay heli karaan saaxir saxiixa.
1 Alcatel 1S
3 Alcatel 3L
Qalabka ugu horeeya ee aan helno waa kan Alcatel 1S. Waa nooc kala duwan oo laga soo galo, kaas oo sumaddu ku dhawaaqday inay tahay nooca ugu dhammaystiran ee noocyadeeda kala duwan. Marka waxay ballanqaadeysaa inay sifiican uqabato iyadoon haysan qiimo aad u sareeya. Moodelkan waxay doorteen naqshad aan lahayn ogeysiis, iyaga oo ku sharraxaya saamiga 18: 9 ee ku jira. Dareeraha sawirka faraha ayaa nagu sugaya dhabarka qalabka.
Marka la eego qeexitaannada, ee nooca heerka gelitaanka, layaab weyn oo RAM ah taas oo ay ku sharaddeen Alcatel 1S. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
Faahfaahinta farsamada Alcatel 1S
Nidaamka hawlgalka Android 9.0 Pie
Screen IPS 5.5 inji oo leh HD + xallinta 1.512 x 720 pixels iyo saamiga 18: 9
Gacaliye Spreadtrum SC9863A
Kaydinta gudaha 32 GB
Kaamirada gadaal 13 + 2 MP oo leh astaamo f / 2.0 + f / 2.8
Kaamirada hore 5 Xildhibaan oo leh f / 2.2
Xuduudaha kala duwan GPS GLONASS Bluetooth 4.2 Dual SIM microUSB 2.0 WiFi 802.11 ac
Tilmaamo kale Raadiyaha FM akhristaha sawirka faraha Furaha (wajiga furitaanka)
Batariga 3.060 Mah
Cabbirada 147.8 x 70.7 x 8.6mm
Peso Gram 146
Qiimaha 109 euros
Waxaan arki karnaa in Alcatel 1Sani uu u yimid sidii tusaale ah xiisaha qaybta dhaqaalaha ugu badan ee suuqa. Waxay ku baxaysaa qeexitaanno dhammaystiran, gaar ahaan haddii aan tixgelinno baaxadda ay gaarto. Maxaa intaa ka badan, waxaan heleynaa kamarad gadaal ah, kaas oo kuu ogolaanaya inaad sawirro fiican ka qaaddo. Waxay sidoo kale muujineysaa jiritaanka dareeraha faraha iyo furitaanka wajiga taleefanka.
Bilaabashadiisu waxay dhici doontaa rubuca labaad ee sanadkan, in kasta oo aanu jirin taariikh cayiman weli. Waxay gaari doontaa dukaamada qiimo dhan 109 euro, ayaa xaqiijisay shirkadda. Kuwa xiiseynaya, waxaa u jiri doona afar midab: madow, buluug, qalin iyo casaan.
Marka labaad waxaan helnaa qaabkan kale, Alcatel 3. Qalab gaadha heerka dhexe ee astaanta, laakiin in ka badan buuxiyo noocyadeeda. Mar labaad, waxay inaga tagaysaa qiimo weyn oo lacag ah. Marka lagu daro qeexitaannada wanaagsan ee noocyadeeda. Waxaan haynaa shaashad leh shaashad, kamarad gadaal laba-laab ah iyo dareeraha faraha ee qalabka. Marka la soo koobo, dhinacyada aan maanta aragno. Kuwani waa qeexitaankiisa:
Faahfaahinta farsamada Alcatel 3
Screen IPS 5.94 inji oo leh HD + xallinta 1.560 x 720 pixels iyo saamiga 19.5: 9
Gacaliye Snapdragon 439
Kaydinta gudaha 32 / 64 GB
Kaamirada gadaal 13 + 5 MP oo leh apertures f / 2.0 + f / 2.4 HDR flash flash iyo blur xulasho
Kaamirada hore 8 Xildhibaan oo leh f / 2.0
Tilmaamo kale NFC (kaliya 64 GB) shidma faraha
Batariga 3.500 mAh oo leh lacag-bixin deg deg ah iyo lacag-la’aan wireless
Cabbirada 151.1 x 69.7 x 7.99 mm
Peso Gram 145
Qiimaha Laga soo bilaabo 159 euro
Ugu dambeyntii, waan arki karnaa taas Alcatel 3 wuxuu noqdaa tartan wanaagsan bartamaha dhexe on Android. Marka lagu daro lahaanshaha naqshadeynta suuqa ee hadda, waxay naga tagaysaa qeexitaanno tartan ah. Waxaan leenahay shaashad wanaagsan, processor-ka caadiga ah ee noocan ah, laba isku-darka RAM / Kaydinta, laba kamaradood iyo dareeraha faraha. Waxaan sidoo kale haysannaa NFC, mid ka mid ah labada nooc ee qalabka.
Sida moodelkii hore, bilawgeeda waxaa loo qorsheeyay rubuca labaad ee sanadkan. Laba nooc oo qalabka ah ayaa la filayaa inay garaacaan dukaamada. Nooca leh 3GB / 32GB wuxuu ku imaan doonaa qiimo dhan 159 euro. Halka nooca kale ee Alcatel 3, oo leh 4/64 GB uu ku kacayo 189 euro.
Ugu dambeyntii waxaan ka helnaa tan Alcatel 3L ee sumadda. Waa aalad aan arki karno inay leedahay waxyaabo badan oo ka siman qalabkii hore, laakiin si fiican u la kulma marka la eego qeexitaannada. Marka waa meel dhexe oo kale oo u hoggaansamaysa, oo leh waxqabad wanaagsan iyo hawlgal. Naqshadeynta waxay la mid tahay sida aan ku aragno taleefankii hore. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
Faahfaahinta farsamada Alcatel 3L
Nidaamka hawlgalka Android 8.1 Oreo (Cusbooneysiinta Pie sanadkan)
Gacaliye Snapdragon 429
Kaydinta gudaha 16 GB
Tilmaamo kale Furitaanka wajiga
Qiimaha Laga soo bilaabo 139 euro
Waan arki karnaa inay leedahay waxyaabo badan oo ay wadaagaan Alcatel 3. In kasta oo kiiskan aan helno processor xoogaa ka sii xun, marka lagu daro hal isku-darka RAM iyo kaydinta. Waxay leedahay awood yar oo keyd ah iyo RAM ka yar aaladdii hore. Intaa waxaa dheer, kiiskan waxaan ogaanay in taleefanku uusan laheyn dareeraha faraha. Waxay noqoneysaa midka kaliya ee kaladuwan ee aan laheyn muuqaalkan.
Marka la bilaabayo, waxay dhici doontaa rubuca labaad ee sanadkan. Annagu uma hayno taariikh cayiman tan, laakiin goor dhow ayaan ogaan doonnaa. Qiimaha aad heli doontaa waa 139 euro, markaa waxay ilaalinaysaa qiimaha la awoodi karo ee aan ku aragno qalabka intiisa kale. Waxaan ku iibsan karnaa laba midab: buluug iyo madow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Alcatel wuxuu ku soo bandhigayaa taleefannada casriga ah MWC 2019
Samsung ayaa dib u magacaabi doonta heerka Galaxy S sanadka soo socda
Filimka Asus ZenFone 6 wuxuu 14-ka bisha May ka bilaabmi doonaa magaalada Valencia ee dalka Spain